Manchester United Oo Cabsi Ku Abuurtay Kooxaha Waaweyn Ee
Kooxaha waaweyn ee Premier League ayaa cabsi ka qaba isbeddelka weyn ee ku dhacay Manchester United intii lagu maqnaa fasaxa fayraska Korona, xilligaas oo ay usoo laabteen dhamaan ciyaaryahannadii hore ugaga maqnaa dhaawacyada.
Liverpool oo horyaalka hanashadiisa aanay waxba ka xigin, Tottenham, Arsenal iyo Chelsea ayaa dhamaantood dib ugu noqonaya qorshahooda suuqa iibka ee mustaqbalka iyo ciyaartoyda ay lacagaha u hurayaan, si ay hore ugu sii socon karaan marka ay dhamaato mushkiladda fayrasku.
Laakiin lixda kooxood ee waaweyn ayaa xog sare muujinaysaa inay ka baqayaan in Manchester United ay noqoto mid awood lasoo laabata oo ku garaaci doonta fagaareyaasha marka ay iska hor yimaaddaan, maadaama iyadoo marka hore uu tababare Ole Gunnar Solskjaer awood u lahaa inuu dhibcaha ka qaato kooxaha sare uu haddana dib u wada helay laacibiintii dhaawacyada kaga maqnaa.
United oo hoos usii socotay intii uu ka tegay Ole Gunnar Solskjaer, lana loollami kari wayday Manchester City iyo Liverpool oo farqi dhibco waali ah ka horreeya, waxa la filayaa in cududdeedu sare usii kacdo marka uu furmo suuqa iibka oo ay lasoo wareegi doono ciyaartooyo dhawr ah oo ay u huri doonto lacag.
Inkasta oo lagu leeyahay deyn cadadkeedu dhan yahay £418.7 milyan, haddana Manchester United ayaa uu wargeyska Maraykanka ah ee wax ka qora tujaarta ee Forbes uu ku qiimeeyey £3.13 bilyan sannadkii hore, waxaana uga dambaysay bishii February oo ay kooxdu shaacisay in dakhligeedu uu qaybtii hore ee xili ciyaareedka sameeyey korodh dhan 7%, taas oo ka dhigan inay usoo xerootay £180.3 milyan, halka ay gunnadii ciyaartoyduna hoos u dhacday 9%, taas oo ka dhigan in faa’iido weyn ay heshay, ayna lacagahaas u adeegsan karayso inay suuqa kaga doonato xiddigo kale oo ay isku xoojinayso.
Jadon Sancho oo Borussia Dortmund ay ku qiimaynayso £100 milyan, Jack Grealish iyo Maddison ayaa ah saddexda ciyaartoy ee shiishku u saaran yahay.
Dhinaca kale, naadiyada la tartamaya, waxa muuqata inay ku jiraan dhibaatooyin.
Liverpool ayaa xilli horeba ku dhawaaqday inay mushaharka ka jartay shaqaalaheeda aanay ciyaartoydu ku jirin ka hor intii aanay culays la saaray kaga noqonin go’aankaas. Tottenham ayaa lagu leeyahay dayn dhan £1 bilyan oo ah lacagtii ku baxday dhismaha garoonkeeda cusub, halka Manchester City lagu riday laba sannadood oo ganaax ah oo ay lagaga mamnuucay tartanka Champions League oo inkasta oo ay rafcaan ka qaadatay aanay wali jawaab helin.
Si kastaba, kooxaha Premier League ee sare, waxay kasii fikirayaan sida ay u ekaan doonto Manchester United oo ay dhaawacyadii uga soo laabteen Scott McTominay, Paul Pogba iyo Marcus Rashford, sidoo kalena uu horeba ugu sii diyaarsanaa Bruno Fernandes oo kacaan dhab ah ka hillaaciyey Old Trafford.